Fikradmaal Think Tank Group – talo ku socota madaxwaynaha iyo xisbiyada | Gabiley News Online
Fikradmaal Think Tank Group – talo ku socota madaxwaynaha iyo xisbiyada
December 22, 2017 - Written by admin
Asalaamucalaykum, salaan ka dib, Ururka Fikradmaal Think Tank Group oo xaruntiisu tahay dalka Sweden oo ku guulaystay saadaasha doorashadii ka dhacday dalka, waxa uu halkan talooyin uga soo jeedinayaa madaxwaynaha iyo xisbiyada.
1. In la joojiyo gaadiidka dawladda ee madaxda iyo shaqaaluhu iska wataan. Caalamka ma jiro baabuur dawladeed oo la iska wato. Baabuurta dawladdu waxa wata oo keli ah booliska, shaqaalaha dadka gaboobay ku booqda guryahooda iwm. Xataa madaxwaynaha Sweden iyo wasiiradiisu waxay wataan baabuur ay iyagu iibsadeen.
2. In aad wax ka qabato caddaaladdarada cashuur ururinta. Danyarta xoogsata aroor walba cashuur ayaa laga qaadaa, laakiin taajirta bariiska keena isaga bariiska uun baa laga cashuuraa, isaguna qiimaha uu ku iibinayo ayuun buu ku daraa cashuurtii uu bixiyay. Markaa miskiinka uun baa cashuurtii taajirka bixiya. Mudane madaxwayne waa in la cashuuro macaashka ay tujaartu macaashaan iyadoo lala xisaabtamayo oo la darsayo hawlahooda ganacsi. Tusaale ahaan guri ama bakhaar ay dhaxleen agoon, oo ay kiro ka qaataan, oo intaasi biil u tahay, ayaa cashuur ahaan looga qaadaa hal bil kiradeeda sannadkiiba. Telesom, Dahabshiil, Maansoor, Ambaasadoor iwm ma laga qaadaa cashuur u dhiganta bil waxay macaashaan sannadkiiba? Maya, lagama qaado! Lacagta dalku u baahan yahay in lagu horumariyo waa in laga raadiyo halka ay taalo oo la joojiyo dulmiga masaakiinta lagu hayo.
3. In aad joojiso sawirada madaxwaynaha ee xafiisyada dawladda la sudho. Waa fikir xun oo ka yimid kelitaliyayaashi caalamka soo maray, kharash badan oo dalku u baahan yahayna galo.
4. Somaliland waxa ay ku tallaabsatay horumar dhinaca dimuqraadiyadda ah. Waxase loo baahan yahay in la sii horumariyo oo laga saaro ku codaynta qabiilka oo dadka intooda badani ku codeeyaan. Waxa doorashooyinkii u dambeeyay ka muuqatay gaashaanbuuro beelo ka kooban oo xisbiyada kala raacsan. Mudane madaxwayne waa in aad doorashada dambe ku gasho waxa aad dalka u qabato shanta soo socda haddii ilaahay yidhaahdo. Haddii kale oo doorasho beelaysan mar kale dalku galo, ururka Fikradmaal wuxu u malaynayaa in ay dhalan karto gaashaanbuur ka xoog badan tii soo saartay Kulmiye.
5. In beelaha caddaalad loo sameeyo oo aan wasiirada lagu tixin beelaha waawayn, ha ahaadaan kuwa beelaha dhexe amaba beelaha bariga iyo galbeedka. Xataa marka beelaha waawayn wasiir la siinayo waxa la siiyaa jilibka ugu tirada badan. Mudane madaxwayne dal kuma dhismi karo in dadka la kala faddilo oo qaar laga dhigo muwaadiniinta heerka labaad.
6. Guddoomiyaha xisbiga Waddani, mudane Cirro, maalintii dhawayd ee uu dalku ku soo noqday wuxu mar kale ku celiyay in uu waddani badiyay doorashada. Fikradmaal waxay ku talinayaan in laga waantoobo haddalada noocaas ah ee sumcadxumada u keenaya dalka. Dimuqraadiyadda dalku wali waxay ku salaysan tahay qabiil, markaa haddii gaashaanbuurtii Waddani markan ay shaqayn wayday ha ka daayo dalka bahdillaadda. Xisbiyadu tartamayaa waa in ay ka koraan qabyaaladda iyo isgaashaanbuuraysiga oo ay waxqabad iyo hadal wanaagsan ku tartamaan.
Allaa mahad leh Khadar Axmed Barkhad Guddoomiyaha Ururka Fikradmaal Global Think Tank Group waryee@hotmail.com